Rastrabani.com | निर्वाचन आयोगलाई प्रश्नः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार जन्म थर कि बिहे थर ? - Rastrabani.com निर्वाचन आयोगलाई प्रश्नः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार जन्म थर कि बिहे थर ? - Rastrabani.com
निर्वाचन आयोगलाई प्रश्नः समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार जन्म थर कि बिहे थर ?
सामाजिक अभियन्ता सरस्वती सुब्बाका अनुसार आफ्नालाई संरक्षण गर्ने गलत बाटोको रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकसित बन्दै गएको छ । उनले भनिन्, ‘यसले एकाध व्यक्तिलाई त फाइदा हुने नै भयो, तर समग्रलाई न्याय गरेको छैन।’ नागरिक दैनिकबाट